Black Engine Oil marara kuti Yellow chawo mafuta muchina - China Chongqing Best Mechanical
Black Engine Oil marara kuti Yellow chawo mafuta muchina Application Waste Black Engine Oil marara muchina iri dongo noukama mafuta Vacuum DISTILLATION chirimwa munhu achangobva dzakabudirira chigadzirwa, izvozvo nemafungiro matsva ruzivo kuoresa mhando dzose tsvina mafuta. izvozvo nokukurumidza kusvina chiedza uye inorema distillates kubva nezvikamu siyana nokuda kupiwa zvakasiyana tembiricha kuzvidzora pamwe BEST pachake akagadzira tiwedzere akakura. Chakabuda pakupedzisira pashure DISTILLATION aigona kugadziridzwa kupinda itsva nemafuta lubricating chawo. ...
Dongo Black Engine Oil marara mumuchina dongo noukama mafuta Vacuum DISTILLATION chirimwa munhu achangobva dzakabudirira chigadzirwa, izvozvo nemafungiro matsva ruzivo kuoresa mhando dzose tsvina mafuta. izvozvo nokukurumidza kusvina chiedza uye inorema distillates kubva nezvikamu siyana nokuda kupiwa zvakasiyana tembiricha kuzvidzora pamwe BEST pachake akagadzira tiwedzere akakura.
Chakabuda pakupedzisira pashure DISTILLATION aigona kugadziridzwa kupinda itsva nemafuta lubricating chawo.
A anomboitika The Waste Oil dzinosvibisa zvinoriumba
Water: Fuel kunopisa kuti CO2 uye H2O.
Nokuti ose fő peturu kupiswa, mumwe ity remvura iri zvakasikwa.
Izvi kazhinji inopfuura nokupira chiutsi kana injini ropisa, asi kana kuchitonhora inogona kumhanya pasi uye unganidza mumafuta. Izvi zvinotungamirira sludge inotungamirwa uye ngura.
Chin'ai uye kabhoni: Ava kuti mafuta kuenda vatema.
Vanoumba sezvo mugumisiro kukwana combustion, kunyanya munguva ushamwari-pamwe akapfuma musanganiswa Lead. Tetraethyl vatungamirire, iyo yaimbonzi kushandiswa Anti-akagogodza mumiriri mu peturu, zvinoenda mafuta.
A chaiwo kushandiswa mafuta injini kunge aine kusvika 2% vatungamirire, asi nhasi chero kutungamirira kunobva kubereka kusakara uye kungangova muna 2 - 12 ppm siyana.
Chinotsva: Unborn peturu kana Diesel anogona kupfuura vakapinda mafuta, zvakare kunyanya panguva kutanga-up.
Abrasives Road guruva: Izvi zvinoenda injini nomumhepo-cleaner.
Rinoumbwa kumashopu tudonhwe silicates. Wear simbi. Iron, mhangura uye aruminiyamu akasunungura kukonzerwa injini kusakara.
Chemical zvigadzirwa: Oxidation zvigadzirwa.
Vamwe mamorekuru mafuta, panguva yakakwirira tembiricha zvichaita oxidize kuumbika zvakaoma uye kungatikanganisa Organic acids. Kwezvinoshandiswa chirungiso vakasara
Around 55 ℃, peturu kutanga kusunungura kuumba tsvina mafuta.
Around 90-100C, mvura wobudiswa tsvina mafuta.
kumativi 110 ℃ - 220 ℃, Diesel wobudiswa batch mangé.
kumativi 220 ° C-300 ° C, Light mafuta nechigadziko vari kwakadonhera kunze
Around 300 ℃ -350 ℃., Namafuta rinorema nechigadziko distills kunze
Light Mafuta (Peturu uye Diesel mafuta)
Lubricating Base mafuta
Flash pfungwa (yakazaruka)
Next: Waste mafuta DISTILLATION Refinery chirimwa
Kuzvigadzira Patsva Old Engine Oil
Dongo Black Engine Oil Recycling Plant
Dongo Gear Oil Recycling
Dongo Hydraulic Oil Recycling
Dongo Motor Oil Recycling Machine
Dongo Oil Recycling Machine